देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालले कोभिड १९ बाट बच्न र रोकथामका लागि सरकारसँग गर्यो जोडदार माग
प्रकासित मिति : २० चैत्र २०७६, बिहीबार प्रकासित समय : २१:५१
काठमाण्डौ,चैत्र २०।देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालले सरकारसँग विभिन्न मागराखि ती मागलाई प्रभावकारी रुपले कार्यान्वयन गर्न आम जनसमुदायसँग यो सरकारलाई आ–आफ्नो ठाउँबाट दवावदिन सचेततापूर्वक अघि बढ्न अनुरोध गरेको छ । वक्तव्यमा जनतालाई राहत दिनु पर्ने अवस्थामा मन्त्रीहरु आफैं औषधी र स्वास्थ उपचार सामग्री जस्ता सम्वेदनशील वस्तुहरुको भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको पाइनु लज्जाको विषय हो भनेर भनिएको छ र पीडितलाई खासै राहत नहुने किसिमको प्याकेज घोषणा गरेर आफ्नो दायित्वबाट सरकार पन्छिने काम गरेको छ र पीडितहरुको समस्याको समाधान हुने किसिमले थप प्याकेजको घोषणा गरियोस भन्दै उक्त मोर्चाका अध्यक्ष सी पी गजुरेलले आज एक प्रेस–वक्तव्यमार्फत यी कुरा अगाडि ल्याउनु भएको छ । प्रेस–वक्तव्यको पूर्ण पाठ तलदिइएको छ:
संसारभर महामारीका रुपमा फैलिएको कोभिड १९ बाट बच्न र यसलाई रोक्न विश्वव्यापीरुपमा प्रयास भैरहेका छन् । यतिखेर विश्वको आधा जनता लक्डाउन्मा छन् । नेपालमा पनि गत दश दिन देखि लक्डाउन जारी छ । यस अवधिमा यस महामारीसँग जुध्न युद्धस्तरमा काम गर्नु आवश्यक थियो । तर, सरकारले त्यो अपेक्षाको एकछेउ पनि पुरा गर्न सकेन । यसबाट पीडित जनताहरुमा झन् निराशा पैदा भएको छ । यस स्थितीमा हाम्रो संगठन, देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल निम्न अनुसारका काम युद्धस्तरमा सम्पन्न गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।
१.यो महामारी सुरु भएपछि अहिलेसम्म नेपालमा भारत लगायतका संक्रमित देशबाट करिव ९ लाख मानिस प्रवेश गरेको अनुमान छ । तिनीहरुको गतिविधिले देशका विभिन्न भागमा संक्रमण फैलिएको हुन सक्ने अवस्थालाई ध्यान दिएर त्यसको जाँच गरिसक्नु पर्दथ्यो । तर सरकार भन्छ – उनीहरुको आँकडा नै तयार गर्न सकिएन । यसले गर्दा ‘५ जनामात्र संक्रमित भएको’ भनेर आत्मरती लिने तर भित्र भित्रै संक्रमितको संख्या बढेर विस्फोटक रुप लिने त होइन ? भन्ने त्रास कायम छ । जे भयो त्यसको मूल्यांकन हुँदै जाला, अब परीक्षणको कामलाई युद्ध स्तरमा अघि बढाइनु पर्दछ ।
२.संक्रमण फैलिन र फैलाउनबाट रोक्नका लागि जुन क्वारेण्टाएनको व्यवस्था गरिएको भनिएको छ, त्यो यति अवैज्ञानिक र यति अस्वस्थ प्रकारको भएको देखिन्छ कि त्यसले उल्टो परिणाम ल्याउने खतरा देखिन्छ । विभिन्न प्रकारका सरकारी वा गैह्र सरकारी भवनहरुलाई उपयोग गर्दै स्वस्थ र वैज्ञानिक प्रकारको क्वारेण्टाइन निर्माण गरी दशौं हजार संक्रमितलाई व्यवस्थित रुपमा राख्ने व्यवस्था अविलम्ब गरिनु पर्दछ ।
३.यसका विमारीहरुको लागि चाहिने आई सि यु र भेण्टिलेटरको व्यवस्था व्यापकरुपमा गरिनु पर्ने हो त्यो भएको देखिँदैन । यसका साथै अन्य रोगका सिकिस्त विमारीहरुले पनि उपचार नपाएको खवर आइरहेका छन् । उपरोक्त व्यवस्थापनको काम सरकारले तीब्रताका साथ गर्नु पर्छ ।
४.रुघा, खोकी र ज्वरो आएका विमारीहरुलाई प्राइभेट मेडिकल कलेजहरुले गेटबाटै भित्र पस्नै नदिने, संक्रमण भएको आसंका गरिएका विमारीबाट त्रसित भै स्वास्थकर्मीहरु उपचारमा संलग्न नै नहुने जस्ता हरकत भैरहेको बुझिएको छ । त्यस प्रकारका मेडिकल कलेजलाई राष्ट्रियकरण गरी सरकारले संचालन गर्ने र एकीकृत स्वास्थ योजना बनाई युद्ध स्तरमा उपचारको कामलाई अघि बढाउने काममा सरकार तीब्रताका साथ लाग्नु पर्दछ ।
४.संरक्षित साधन नहुँदा समेत ज्यान जोखिममा राखेर खटेका डाक्टर, नर्स र अन्य स्वास्थकर्मीहरुलाई आवश्यक सुरक्षा सामग्री उपलव्ध गराउने, आवश्यक मेशिन र औषधीको व्यवस्था गर्नुका साथै उनीहरुको स्वास्थ बिमा र भत्ता र अन्य सहुलियत उचित मात्रामा अविलम्ब उपलव्ध गराउनु पर्दछ ।
५.नेपाल र भारत दुबै देशले लक्डाउन् र सिमा बन्द गरिसके पछि नेपालको सीमामा आइपुगेका भारतमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकहरु केही दिन देखि सीमानामा भोक भोकै र अलपत्र अवस्थामा छन् । नेपाली भएको हुनाले उनीहरुको हितको लागि काम गर्नु पर्ने जिम्मेवारी नेपाल सरकारले हो, जुन मुक दर्शक बनेर बसेको छ । उनीहरुलाई भारत सरकार सँग वार्तागरी या त भारतीय सिमा भित्रै क्वारेण्टाइनको उचित व्यवस्था गरेर राखियोस् या नेपाल भित्रै क्वारेण्टायनमा उचित सुविधा सहित राखियोस् ।
६.सरकारले केही दिन अघि राहत्को लागि आर्थिक प्याकेजको घोषणा गरेको छ । पीडितलाई खासै राहत नहुने किसिमको प्याकेज घोषणा गरेर आफ्नो दायित्वबाट सरकार पन्छिने काम गरेको छ । पीडितहरुको समस्याको समाधान हुने किसिमले थप प्याकेजको घोषणा गरियोस ।
७.श्रमिकहरुको लागि यो लक्डाउन् अर्को कोरोना भाइरस बन्न पुगेको छ । श्रमिक र अन्य तल्लो वर्गको दैनिक समस्याको समाधान गर्ने व्यवस्था केन्द्र सरकारले अविलम्ब गरोस् ।
८.महामारीबाट उत्पन्न संकटको मौका छोपी उपभोग्य वस्तुहरु, पकाउने ग्यास, मास्क र औषधि समेत कालाबजारी गरेर कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेहरुलाई जेल सहितको सजाय गरेर लुकाएको सामान नहुनेहरुलाई वितरण गरियोस् ।
९.कालोबजारी गर्नेलाई तह लगाएर जनतालाई राहत दिनु पर्ने अवस्थामा मन्त्रीहरु आफैं औषधी र स्वास्थ उपचार सामग्री जस्ता सम्वेदनशील वस्तुहरुको भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको पाइनु लज्जाको विषय हो । उनीहरु माथि किन कारवाही गर्ने काम भएन ?
यतिखेर लक्डाउन्को अबज्ञा गर्ने, कोरोनाको विरुद्धका कदमलाई असहयोग गर्ने जस्ता काम कसैले पनि गर्नुु हुँदैन । कोभिड १९ का विरुद्ध एकतावद्ध भएर अघि बढ्न हामी सम्पूर्ण जन समुदाय सँग अनुरोध गर्दछौं । यदि सरकारले उपरोक्त कामहरुलाई पुरा गर्ने तत्परता देखाउँदैन भने, हामी तमासे भएर भने बसिरहन सक्दैनौ । हामी जहाँ छौं, त्यहीँबाट उपयुक्त सन्देश दिने, जनतालाई सजग गराउने र सरकारलाई दवाब दिने काममा सचेततापूर्वक अघि बढ्न हामी सबै आदरणीय जन समुदाय सँग अनुरोध गर्दछौं ।